रेडियो ताप्लेजुङ नेपाली कलाकारको दसैं कसरी बित्नेछ ? कस्ले, कहाँ, कसरी मनाउँदैछन् यसपालीको दसैं ?
नेपाली कलाकारको दसैं कसरी बित्नेछ ? कस्ले, कहाँ, कसरी मनाउँदैछन् यसपालीको दसैं ?
कार्तिक १ गते । नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी संघारमै आइसकेको छ ।
वर्षभरिका कामलाई थाँति राख्दै आफ्ना परिवारसँगको भेटघाट चलिरहेको छ । हरेक चाडबाडले आआफ्नै महत्व राख्छन् । त्यसमा पनि विजया दशमीको महत्व बेग्लै हुने गरेको छ ।
कुन कलाकारहरुले दसैं कसरी र कहाँ मनाउँदैछन्, आउनु्स् जानकारी लिऔं
हास्य कलाकार तथा चलचित्र निर्देशक दिपाश्री निरौला यतिबेला विभिन्न हलमै पुगेर दर्शकलाई चलचित्र हेर्न प्रोत्साहन गरिरहेकी छिन् । उनको बसाई काठमाडौंमै भए पनि उनी हरेक दसैं भने विराटनगरमा मनाउने गर्छिन् ।
यस पटक पनि दिपा आफ्ना परिवारसँगै दसैं मनाउन विराटनगर जाने तयारीमा छिन् । केही समयअघिसम्म उनका मातापिता पनि काठमाडांैमै थिए । तर दशै नजिकिएसँगै विराटनगर गइसकेका छन् ।
दिपा भने नवमीको दिन विराटनगर जाँदैछिन् । विराटनगरमा आमाबाबुको हातबाट टिका लगाएर पूर्वका विभिन्न स्थानहरुमा दर्शकसँगै बसेर छक्का पञ्जा ३ हेर्ने उनको सोच छ ।
छक्का पञ्जा ३ का निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरीको दसैं काठमाडौमा नै बित्नेछ । उनी पनि दसैं सामान्य रुपमा नै मनाउने सोचमा छन् । आफ्ना परिवारसँग बसेर टिका लगाउने, आफूभन्दा ठूलाबाट आशिर्वाद लिने र सानालाई टिका लगाएर आशिर्वाद दिने ।
त्यसबाहेक सबै परिवारसँग बसेर दसैंमा छक्का पञ्जा ३ हेर्ने दिपकको योजना छ । बाँकी रहेका अन्य दिनहरुमा भने दर्शकसँगै रहने र चलचित्र छक्का पञ्जा ३ हेर्ने दिपकले बताए ।
नेपाली चलचित्र इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सिक्वेल निर्माण गर्ने निर्देशक हुन् बिकासराज आचार्य ।
उनको चलचित्र नार्इं नभन्नू ल ५ ले सफल व्यापार गरिसकेको छ । यति बेला उनी चलचित्र हजार जुनिसम्म निर्माण गन कस्सिएका छन् । केही दिनका निम्ति यी सबै कामहरुलाई थाँति राख्दै आफ्ना परिवारसँग दसैं मनाउन उनी विराटनगर पुगेका छन् ।
उनका काकाको निधन भएका कारण उनले यस पटकको दसैंमा टिका लगाउने छैनन् । तर आफ्ना परिवारसँग भेटघाट र रमाइलो गर्ने गरि उनी विराटनगर पुगेका छन् ।
वर्ष दिनमा एक पटक आउने चाडमा टिका नलगाएपनि परिवारसँगै रहेर खुसियाली साटासाट गर्नु पर्छ भन्छन उनी । दसैं मनाएर फर्किएपछि भने हजार जुनिसम्म चलचित्रको काम अघि बढाउने उनको तयारी छ ।
चलचित्र अनुरागबाट चलचित्र नगरीमा डेव्यु गरेका निर्माता हुन ऋषि धमला । उनी २०७५ सालको दसैं क्यानाडामा मनाउने तयारीमा छन् । आफ्नी श्रीमती नायिका एलिजा गौतम तथा २ सन्तान समेतलाई लिएर उनी दसैं मान्न क्यानडा जान लागेका हुन् ।
उनका सासु–ससुरा क्यानाडामा नै बस्दै आएका छन् । यो दसैंमा उनी आफ्ना सासु–ससुरासँगै टिका थापेर आशिर्वाद आदान प्रदान गर्दैछन् ।
चलचित्र नगरीका सफल निर्देशकहरुमध्येका एक हुन् निर्देशक नवल नेपाल । उनी यसपालीको दसैं इटहरीमा मनाउँदै छन् ।
आफ्नो परिवारसँग रमाउन उनी इटहरी गइसकेका छन् । मान्यजनहरुबाट आशिर्वाद लिने र आफूभन्दा सानालाई आशिर्वाद दिएर सामान्य हिसाबले दसैं मनाउने उनको सोचाई छ ।
अर्काको देखासिकीमा नलागी आफ्नै क्षमताअनुसार चाड मनाउनु पर्छ भन्ने धाराणा राख्छन उनी ।
जितु नेपाल भर्खरै न्युजिल्याण्डको कार्यक्रम सकेर नेपाल फर्किएका छन् । यसपालिको दसैं उनी आफ्नै परिवारसँग काठमाडौंमै मनाउँदै छन् ।
उनी दसैंमा टिका लगाएर अफ्नो परिवारको साथमै बसेर चलचित्र हेर्ने र दर्शकलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न हलमा जाने र दर्शकसँगै बसेर चलचित्र हेर्ने तयारीमा छन् ।
यस्तै नेपाली हास्य टेलिचलचित्र भद्रगोलका निर्देशक तथा कलाकार अर्जुन घिमिरेको दसैं नुवाकोटमा बित्ने छ । उनी दसैंअघि गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँहरुमा हुने कार्यक्रममा व्यस्त रहनेछन् र नवमीका दिन नुवाकोटमा रहेको आफ्नै घरतिर लाग्नेछन् ।
आमाबाबुको हातको टिका थाप्ने र काठमाडौं फर्किएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने उनको योजना छ ।
नायिका दीपिका प्रसार्इं दसैं मनाउन केही दिनअघि नै आफ्नो घर धनगढी गइसकेकी छिन् । उनी अभिनित चलचित्र छक्का पञ्जा ३ यतिबेला प्रदर्शन भइरहेको छ ।
चलचित्रले सफल व्यापार गरिरहँदा उनी भने आफ्नो परिवारसँग खुशीयाली साटासाट गर्नका धनगढी गएकी हुन् । उनी यसपालीको दसैं आफ्नै परिवारसँग मनाउने तयारीमा छिन् ।
उनी दसैं मनाएर काठमाडौं फर्किएपछि नयाँ चलचित्रमा लाग्ने तयारीमा छिन् ।
नवल नेपालले निर्देशन गर्ने भनिएको नयाँ चलचित्रमा उनी काम गर्न तयार भएको बताइएको छ ।